Wiricheya Yakasimba - Yakasimba Simba Sachigaro
A wiricheya iyo inonzi yakasimba simba kana yakasimba inofanirwa kuve nehunhu hunogona kusanganisira huremu hwakareba hwezvinhu zvine simba, huremu hwehuremu hunofanira kunge hwakakwira kupfuura avhareji wiricheya naizvo.
vamwe mawiricheya akaomarara dzinoonekwa sedzemasimba chair nekuti dzakanyatso kusunganidzwa kuita imwechete-chidimbu furemu. Zvichireva kuti vaigona kutsungirira kukuvara kwakawanda uye kuchengetedza mamiriro efuremu.
Zvimwe zvigaro zvakarongedzwa mune dzino zvakateedzana zvinogadzirwa kubva kune inorema-basa simbi zvinhu, nepo zvimwe zvingaitwe neepamusoro unhu zvinhu, senge kabhoni fiber.
Kushanda kana Sports mawiricheya inoonekwa sechimwe chikamu cheichi chikamu nekuti aya marudzi emacheya akagadzirwa uye anogadzirirwa mushandisi anoshanda. Nekuti iri mhando remushandisi raizove rinoshanda zuva nezuva, izvo zvigadzirwa uye dhizaini inoshandiswa kugadzira iyi mhando yechigaro ingangoda kuve yakasimba simba uye yakasimba.
Macheya ane simba ane huremu hwakakura kupfuura hunowanzoitika mavhiripu. Izvi zvinodaro nekuti kazhinji chigaro chine simba chinoshandiswa neakakura kupfuura avhareji vanhu.
Mawiricheya ezuva nezuva ndiyo mhando yechigaro ine simba uye yakasimba simba. Zvimwe zvakaomarara mavhiripu inoonekwa seyakasimba nekuti ivo vanongoita chidimbu-chimwe chidimbu wiricheya. Chimwe chidimbu chinoreva izvozvo wiricheya yakasunganidzwa kuita chidimbu chihombe.
simba mavhiripu ndiwo masimba akakwirira
simba mavhiripu inogona zvakare kutorwa seyakasimba kana vari basa rinorema kana kana vari off-road based.